Warar - Waa maxay shaqooyinka uu mashiinka xiirashada biraha leeyahay?
Shaqooyin noocee ah ayuu leeyahay mashiinka xiirashada biraha?
Mashiinka xiirashada biraha wuxuu leeyahay codsiyo kala duwan, waxtarka shaqada sare, hawl fudud, iyo dayactir ku haboon. Hoyga ayaa lagu dhejin karaa gudaha ama dibedda. Mashiinka xiirashada biraha waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo habab cilmiyaysan. Waxa ugu horreeya ayaa ah in mootada ay koontaroolaan kontoroollo barnaamij la socon kara iyadoo loo eegayo baahiyahayaga. Cadaadiska, xawaaraha iyo istaroogga ee ay sameysay dhamaantood waxay ku saleysnaan karaan Tiknoolajiyada waxay u baahan tahay in wax laga beddelo, iyo xaddidaadda iyo howlaha kaleba si fiican ayaa loo dhameystiri karaa.
Mashiinka xiirashada biraha wuxuu leeyahay shaqeynta labo mashiin hal mid, oo isku soo ururin kara (birta duugga ah, naxaasta duugga ah, aluminiumka duugga ah, birta duugga ah, birta birta ah, qashinka gawaarida duugga ah, iwm.) Baakadaha qaabab kala duwan iyo qeexitaannada sida cuboid, sideed, iyo dhululubo. Baloogga ayaa markaa loo jarayaa qalab horay loo sii farsameeyay. Taxanahan jeexjeexyada biraha waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinnada birta, warshadaha dib u warshadaynta iyo soo-saarka, warshadaha wax soo saarka iyo warshadaha dhalaalida.
Markaad xiiraysid guntinta duudduuban, daabku waa inuu la socdaa qaybta la dhaqaaqayo, yacni, daabku waa inuu dhammaystiraa goynta iyo dhaqaaqista isla waqtigaas, iyo xawaare-hoosaad-deg-degga ah ee v ee xiirashada jihada dhaqaaqa ee gabal duubku waa inuu la mid yahay kan gogosha rogista. Dhaqdhaqaaqa xawaaraha vo wuxuu la mid yahay ama ka weyn yahay 2% ~~ 3%, taas oo ah, v = (1 ~ 1.03) v0. Markaad xiiraysid gabalka duuban, haddii xawaaraha degdegga ah ee v ee xiirashada qaybta ku socota jihada gunta la duubay uu ka yar yahay xawaaraha socodka v0 ee duubka la duubay, geesaha xiiristu waxay hor istaagi doontaa dhaqdhaqaaqa gabalka duuban, taas oo sababi doonta gabal duudduuban oo laaban, oo xitaa sababa gabal duubka inuu ku duubo shilka mindi. . Taas bedelkeeda, haddii xawaaraha degdegga ah ee v ee xinjirta dhinaca jihada dhaqdhaqaaqa gabalka duuban inta lagu jiro xiirashada uu aad uga ballaaran yahay xawaaraha dhaqaaqa ee guntinta v0, walwal xoog leh oo culeys ayaa ka soo bixi doona qeybta la duubay, taas oo saameyn doonta tayada xiirid gabal duudduuban. Iyo kordhinta culeyska saameynta mashiinka xiirashada.
Marka loo eego noocyada kala duwan ee alaabooyinka iyo qeexitaannada iyo shuruudaha isticmaalaha, mashiinka dhogorta bir isku mid ah waa inuu awood u yeeshaa inuu gooyo qeexitaanno badan oo dherer ah, oo sameeyo dulqaadka cabbirka cabbirka iyo tayada qaybta la jaray ay la kulmaan xeerarka ku habboon;) Waxay la kulmi kartaa wareejinta shiidi ama cutubyada looga baahan yahay Wax soo saar.
Sheet Birta Baler, Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah, Baler Xadhig Baler, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger, Mashiinka Birta Briquette,